Fisavoritahan’ny antontanisan’ny coronavirus: niezaka nanamarin-tena ny Institut Pasteur de Madagascar | NewsMada
Fisavoritahan’ny antontanisan’ny coronavirus: niezaka nanamarin-tena ny Institut Pasteur de Madagascar
Nitondra fanazavana tamin’ny mpanao gazety ny eo anivon’ny Institut Pasteur (IPM), omaly teny amin’ny foiben-toerany Avaradoha. « Manamarina ny fanadihadiana nataonay fa tsy nahitana tsy fahatomombanana teo amin’ny fanaovana fitiliana ny Covid-19 tao aminay. Voahaja an-tsakany sy an-davany koa ny fepetra rehetra momba ny fahadiovana… », hoy ny talen’ny IPM, ny Pr André Spiegel. Nanteriny fa tsy nahitana lesoka tamin’ny fanatanterahana ny fikirakirana natao. Matihanina sy mahafehy tanteraka ny teknikan’ny fitiliana nampiasaina ireo mpiasa eo anivon’ny laboratoara, anisan’ny nikirakira ny santionany (échatillon). Nohamafisin’izy ireo fa azo antoka tanteraka ny voka-pitiliana navoakan’ny IPM.
Raha ny fantatra anefa, manomboka eo anivon’ny IPM ihany ireo fitiliana rehetra ary ny fitaovana fitiliana mivoaka avy amin’izy ireo ihany.
Niaiky ny lesoka ny IPM
Etsy andaniny, raha milaza izy ireo fa nisy tsy fahatomombanana tamin’ny voalohany, tsy tokony ho afa-bela koa izy ireo izany. Sa ireo fitaovana fanaovana fitiliana voalohany no efa misy tsy fetezana hatramin’ny voalohany ? Raha izany no mitranga, tokony mangataka famerenana ny fitiliana ny IPM. Niaiky rahateo izy ireo fa tena nisy tokony ny lesoka.
Voaporofo izany satria ny dimy ihany amin’ireo 55 natao filitiana no mitondra ny tsimokaretina. Mbola naverina natao fitiliana indray koa ireo 11 ambiny ka dimy ihany koa ireo tratran’ny Covid-19. Miisa 10 amin’ireo 67 izany no tratran’ny coronavirus raha izy rehetra ireo : 35 maraina ary 32 hariva, no navoakan’ny IPM ny 6 mey teo fa nifindran’ny valanaretina, tany am-piandohana. Mameno azy ireo ho 67 ilay vehivavy iray, nodimandry tsy mitondra ny tsimokaretina fa nanana olana teo amin’ny voa.
Tsy afa-po amin’ny fanazavan’ny IPM ny governemanta
Tsy mahagaga raha mitaky ny mangarahara ny eo anivon’ny fitondram-panjakana momba ity fisavoritahan’ny antontanisa ity. « Tsy nahafa-po ny fanazavana nentin’ny Institut Pasteuer (IPM) satria tsy nahafahana nitondra valiny mazava tamin’ireo fanontaniana sy ahiahy maro napetraky ny fitondram-panjakana mahefa. Hotohizana hatramin’ny farany araka izany ny fanadihadiana lalina ahitana ny nahatonga ity olana goavana ity sy ny tompon’andraikitra tamin’izany », hoy ny fanambaran’ny governemanta, ny alarobia 13 mey teo. Nampanantena ny fanjakana fa havoaka ho fantatry ny besinimaro ny vokatry ny fanadihadiana rehetra.